Waa maxay macnaha hantida maguurtada ah? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks amaah estate Real
amaah estate Real
Waa maxay a amaah estate Real?
Amaah deymis oo dhab ah waa deyn adag oo la isku xidho si loo maalgeliyo hantida maguurtada ah. Laga soo bilaabo deynta caadiga ah, deynta hantida aan la dabaqi karin waxay ku kala duwan tahay shuruudaha kala duwan: Inta badan hay'adaha maaliyadeed ayaa u qoondaynaya amaahda guryaha oo kaliya oo ka yar xaddiga deynta ee 25.000 ama 50.000 Euro. Kala duwanaanshaha amaahda macaamilka ayaa ah inaadan u isticmaali karin lacagta.
ka lacagta amaah waxaa loo isticmaali karaa oo keliya in dib loo cusbooneysiiyo ama dayactir lagu sameeyo iyo sidoo kale iibsashada ama dhismaha guryaha ama guryaha. Daymaha hantida maguuraanka ah waxaa bixiya hay'adaha amaahda ah ee ganacsiga iyo sidoo kale maalgelinta hantida guryaha gaarka loo leeyahay.
Amaahda guryaha - kala duwanaansho kala duwan
Amaahda guryaha ee guryaha waxaa bixiya bangiyada noocyo kala duwan ah. Kuwani waa:
- Daymaha casriinta
- Amaahda guryaha
- Amaahda guriga
Iyadoo ku xiran ujeedada aad u codsaneyso deyn aan dhammaysnayn, waxaa laga yaabaa in wax kale oo khaas ah ay jiraan.
Amaahinta casriyeynta: Amaahda casriyeynta waxaa sidoo kale loo yaqaannaa amaahda guryaha. Maadaama uu yahay milkiilaha guri ama guri waxaad u baahan doontaa deyn casri ah oo dhakhso ah ama ka dib. Waxaad u isticmaali kartaa lacagta si loo casriyeeyo musqusha ama si aad u cusbooneysiiso gurigaaga xaalad cusub. Haddii aadan haysan lacag ku filan, waxaad u baahan tahay inaad dalbato amaahda guryaha ijaarka ah. Haddii wadarta deyntu aysan ka badnayn Euro 35.000, waxaad ku bixin kartaa deynta aasaasiga ah ee hantidaada diiwaanka dhulka. Waxaad sidoo kale codsan kartaa kabitaan dhaqaale oo loogu talagalay cusbooneysiinta tamarta. Dayactirka casriyeynta dhab ahaantii waa deyn hantida lagu guursan karo oo leh ujeedo xaddidan. Waxay caymiyaan deyn bixiyaha si loogu isticmaalo miisaaniyada si gaar ah loogu casriyeynayo waxaana lagu abaalmariyaa faa'iidada dulsaarka dulsaarka. Codsade ahaan, waa inaad caddaysaa inaad tahay milkiilaha hantida maguurtada ah. Ka dib marka shaqada la soo dhameeyo, waa inaad soo gudbisaa qoraalka deyn bixiyaha.
Amaahda guriga: Deynta degaanku waa deyn dhab ah, kaas oo aad maalgeliso iibsashada guryaha is-kaashatada. Haddii aad hadda ku nooshahay kireyste, waxaad isticmaali kartaa kirada mulkiilaha hantida si aad dib ugu bixiso amaahdaada guryaha. Maadaama aad tahay mulkiilaha hantida, kama faa'iideysan doontid xaqiiqda ah inaad awood u leedahay inaad ku bixiso deyntaada kharashka ijaarka, halka kiradaada laga yaabo inay sii korodho sanadaha soo socda.
Amaahda guriga: iibsashada guri aanad u baahnayn inaad ku maalgeliso deyn xaqiiqo ah. Amaahdan guryaha ah waa mid ka kooban qaybo kala duwan. Astaamaha kala duwan waa:
- Deynta Deynta
- Deynta KfW
- Dhismaha amaahda amaahda
Amaahda amaahda waxaa lagu siiyaa shirkadaha caymiska, bangiyada kaydka iyo bangiyada. Kala duwanaanshaha ugu badan ee la isticmaalay waa tan magdhow, Si kastaba ha noqotee, waxaad heli kartaa amaahda deyn bixinta deynta ugu dambeysa ama deyn bixinta.
Deynta amaahda dhismaha waxay ku habboon tahay maalgelinta hantida maguurtada ah haddii aad mar horeba lacag ku bixisay qandaraaska dhismahaaga sanado badan. Badanaa, bangiyada waxay bixiyaan amaahda deynta guryaha oo dheeraad ah. Sababtaa awgeed, talada maalgelinta waa mid faa'iido leh.
Deynta KfW waxaa lagugu siinayaa Kreditstedt für Wiederaufbau oo ujeedooyin kala duwan. Iibsashada guryaha hoyga waxaa lagu dallacayaa deyn xaq leh oo ku habboon ugu badnaan 50.000 Euro. Qalabaynta iyo casriyeynta tamarta tayada leh, waxaad heli kartaa kabitaan goboleed ilaa ugu badnaan 100.000 Euro.
Deeqaha amaahda waxaa sidoo kale bixiya bangiyada maalgelinta gobolka. Badankood waxaa loogu talagalay qoysaska da'da yari, sidaas darteedna waa kuu habboon tahay.
Farqiga u dhexeeya deynta hantida guryaha iyo deyn qaadashada
Markaad qaadato deyn xaqed ah, waxaad ku dallacdaa dulsaarka deynta bangigaaga. Xaaladdan, dulsaarka dulsaarka ah ee muddada bixinta gaarka ah waa qandaraas lagu heshiiyey. Tani waxay ka madax bannaan tahay horumarinta dulsaarka dhabta ah.
Maqaalka horegaadhista waaweyn
Maqaalka xigtaKulanter credit